Dutchtown နှင့် South Side Voting Information • DutchtownSTL.org
Dutchtown ဆုံးဖြတ်: မဲ!
ထိုသုံးပါ ဘာသာပြန် ထိပ်ပိုင်းမီနူးရှိခလုတ်ကိုနှိပ်ပါသို့မဟုတ်ငါတို့သွားပါ ဘာသာပြန်စာမျက်နှာ စပိန်၊ ဗီယက်နမ်၊ အာရဗီ၊ နီပါလီနှင့်အခြားဘာသာစကားများဖြင့်မဲပေးခွင့်ရရှိရန်။
နှင့်အတူပူးပေါင်း Dutchtown တရားမျှတမှုမဟာမိတ်အဖွဲ့ကျနော်တို့ Dutchtown ရပ်ကွက်အတွင်းရှိမဲဆန္ဒရှင်များအတွက်အရေးကြီးသောသတင်းအချက်အလက်အချို့ကိုစုဆောင်းပြီးဖြစ်သည်။*
စိန့်လူးဝစ္စတွင်လူ ဦး ရေအများဆုံးနှင့်လူ ဦး ရေအထူထပ်ဆုံးဒေသဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်နီးချင်းများသည်ဒေသန္တရရွေးကောက်ပွဲများအပေါ်ကြီးမားသောသက်ရောက်မှုရှိနိုင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် Dutchtown တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ထောင်နှင့်ချီသောမဲဆန္ဒရှင်များဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အသိုင်းအ ၀ ိုင်းအတွက်အရေးအကြီးဆုံးသောကိုယ်စားလှယ်လောင်းများနှင့်မဲဆန္ဒရှင်များအတွက်အတူတကွစုရုံးခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အာဏာတည်ဆောက်ပုံများကို ပြောင်းလဲ၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ရပ်ကွက်အတွင်းပိုမိုကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်သည့်မူဝါဒအပေါ်သြဇာသက်ရောက်နိုင်သည်။
Dutchtown ဗီဒီယိုဖြင့်ဆုံးဖြတ်သည် Grand Cross.
အတည်ပြုချက်ပေးသည့်မဲပေးစနစ်အသစ်နှင့်အတူစိန့်လူးဝစ္စလူတို့သည်သူတို့၏မဲပေးမှုအလေ့အထများကိုပြုပြင်ရန်လိုအပ်သည်။ မတ်လနှင့်Aprilပြီလနှစ်ခုလုံးတွင်ရွေးကောက်ပွဲကိုပြသခြင်းသည်ယခင်ကထက် ပို၍ အရေးကြီးသည်။
အတည်ပြုမဲပေးခြင်းသည်မဲဆန္ဒရှင်များသည်တစ် ဦး တည်းသာမဟုတ်ဘဲ ဦး စားပေးရွေးချယ်ထားသောမည်သည့်အရေအတွက်ကိုမဆိုရွေးချယ်နိုင်သောရွေးကောက်ပွဲစနစ်ဖြစ်သည်။ ၂၀၂၀ နို ၀ င်ဘာလရွေးကောက်ပွဲတွင်မဲဆန္ဒရှင်များသည်အတည်ပြုချက်ပေးသည့်မဲစနစ်ကိုအတည်ပြုပေးခဲ့သည်။
စိန့်လူးဝစ္စတွင်အတည်ပြုမဲပေးခြင်းကိုအတည်ပြုပြီးသည်နှင့်အမျှမြူနီစီပယ်ရွေးကောက်ပွဲနှစ်ခုကိုဆက်လက်ကျင်းပမည်ဖြစ်သည်။ မတ်လတွင်အဓိကကျသောရွေးကောက်ပွဲနှင့်Aprilပြီလတွင်ကျင်းပမည့်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ အဓိကအချက်မှာကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကိုအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲသို့ ၀ င်ရောက်ရန်“ သဘောတူ” သည့်နေရာဖြစ်သည်။
မူလတန်းရွေးကောက်ပွဲတွင်သင်နှစ်သက်သောကိုယ်စားလှယ်လောင်းအားလုံးနှင့်ဆန္ဒမဲပေးနိုင်သည်။ တစ်ခု၊ နှစ်ခု၊ အားလုံးသို့မဟုတ်တစ်ခုမျှမရှိပါ။ သို့သော်သင်ရွေးချယ်သူသည်သင်နှင့်သာသက်ဆိုင်သည်။ သင်၏ရွေးချယ်မှုများသည်အခြေခံအားဖြင့် ဦး စားပေးဖော်ပြချက်တစ်ခုသို့မဟုတ်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင်ပါ ၀ င်သောထိုကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကိုသင်သဘောတူခွင့်ပြုသည်ဟုဖော်ပြသည်။ အဆင့်သတ်မှတ်ရွေးချယ်ထားသောမဲပေးသည့်စနစ်နှင့်မတူသည်မှာသင်၏အတည်ပြုချက်အားလုံးသည်တူညီသောအလေးချိန်ရှိသည်။
အတည်ပြုချက်ပေးသည့်မဲပေးစနစ်အသစ်အရပါတီဆက်နွယ်မှုများကိုဖယ်ရှားပစ်လိုက်သည်။ မူလရွေးကောက်ပွဲသည်ဘက်လိုက်မှုမရှိတော့သောကြောင့်သင်မည်သည့်မဲကိုသင်လိုအပ်သည်ကိုစစ်တမ်းကောက်သူအားပြောမည်မဟုတ်တော့ပါ။ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများစွာသည်၎င်းတို့၏ပါတီ၏အထောက်အထားများကိုကြေငြာဆဲဖြစ်သော်လည်းဆန္ဒမဲပေါ်တွင်ဒီမိုကရက်သို့မဟုတ်ရီပတ်ဘလီကန်အမှတ်အသားကိုသင်မတွေ့ရပါ။
မူလခွင့်ပြုချက်အများဆုံးရရှိသောကိုယ်စားလှယ်လောင်းနှစ် ဦး သည်Aprilပြီလတွင်ကျင်းပမည့်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင်ပါဝင်သည်။ ကွင်းပြင်နှစ်ခုကိုနှစ်ကျဉ်းကျဉ်းကျဉ်းကျဉ်းကျဉ်းကျဲကျဲဖွင့်ပေးလိုက်ရာမဲအများစု (၅၀% + ၁) အနိုင်ရရန်လိုအပ်သည်။ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင်သင်တစ် ဦး တည်းသာရွေးချယ်ရမည်။ ထို့အပြင်ဆန္ဒမဲအများဆုံးရရှိသည့်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းသည်ရာထူးခန့်အပ်ခြင်းခံရသည်။
ယခင်ကစိန့်လူးဝစ္စတွင်မြူနီစီပယ်ရွေးကောက်ပွဲများသည်မတ်လတွင်ပါတီ၏အဓိကကျသောရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုဖြစ်ပြီးAprilပြီလတွင်ကျင်းပသောအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲဖြစ်သည်။ သင်သည်သင်၏ရွေးချယ်ထားသောပါတီ (ဒီမိုကရက်ပါတီ၊ ရီပတ်ဘလီကန်စသည်) အတွက်ဆန္ဒမဲတောင်းပြီးနောက်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင်မည်သည့်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းကိုကိုယ်စားပြုမည်ကိုရွေးချယ်ပါလိမ့်မည်။
စိန့်လူးဝစ္စတွင် (မြို့တော်မှရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံထားရသူများအားလုံးသည်ဒီမိုကရက်များဖြစ်ကြသည်) တွင်ဒီမိုကရက်များအပေါ်အလွန်အမင်းစိတ်အားထက်သန်မှုကြောင့်လူအများစုကအဓိကရွေးကောက်ပွဲသည်“ ရွေးကောက်ပွဲ” ဖြစ်သည်ဟုယူမှတ်ကြသည်။ မည်သည့်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းမဆိုဒီမိုကရက်တစ်မူလတန်းကိုအနိုင်ရသည်မှာtheပြီလအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင်ယှဉ်ပြိုင်မှုအနည်းငယ်သာရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့်theပြီလရွေးကောက်ပွဲတွင်မဲပေးသူများသည်မတ်လရွေးကောက်ပွဲထက်ပုံမှန်ထက်နိမ့်သည်။
အဘယျသို့ Next ကို?
ပြင်ဆင်ပါ။ လျှောက်ထားသူများကိုလေ့လာပြီးသင်၏အတည်ပြုချက်ကိုမည်သူခံထိုက်ကြောင်းဆုံးဖြတ်ပါ။ မဲဆန္ဒရှင်များစွာကိုလမ်းညွှန်ရန်ပါတီ၏ဆက်နွယ်မှုမရှိပါကကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၏အမည်များကိုသိရန်နှင့်သင်ပြုလုပ်သည့်မူဝါဒများကိုသေချာစေရန်သင်လိုအပ်သည်။
ရွေးကောက်ပွဲမှာစိတ်ရှည်ပါ။ အတည်ပြုမဲပေးသည့်စနစ်သည်အသစ်ဖြစ်နေကြောင်းသတိရပါ။ သင်၏မဲဆန္ဒရှင်များကိုလည်းအချိန် ပေး၍ နားလည်အောင်သေချာစေရန်သင်၏အချိန်ကိုယူပါ။ သင်မဲရုံသို့ရောက်သောအခါမိနစ်အနည်းငယ်ခန့်ကြိုတင်စီစဉ်ပါ။
မြဲပါ! သငျသညျမတ်လအတွက်မဲပေးခဲ့ကြပေမည်, သို့သော်Aprilပြီလရွေးကောက်ပွဲအသစ်သောအရေးပါမှုနှင့်တန်ဖိုးကိုရရှိထားသူဖြစ်ပါသည်။ ရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုချင်းစီအတွက်ရွေးကောက်ပွဲများကိုပြပါ။
သင်လုပ်နိုင်သည် သင်၏မဲရုံနေရာကိုရှာပါ ရွေးကောက်ပွဲဘုတ်အဖွဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်မှာ။ သင်၏မဲဆန္ဒနေရာကိုရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီမေးလ်ဖြင့်သင်လက်ခံရရှိသောရွေးကောက်ပွဲအသိပေးစာပို့စကတ်တွင်လည်းဖော်ပြထားသည်။
ပိုကြီးမားသော Dutchtown အိမ်နီးချင်းရှိမဲရုံများ
Dutchtown အတွက် Aldermanic ရပ်ကွက်။
အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောနေရာများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ရပ်ကွက်အများစုကိုအကျိုးပြုသောမဲရုံများဖြစ်သည်။ သေချာအောင်လုပ်ပါ သင်၏မဲရုံနေရာကိုစစ်ဆေးပါ မြို့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာသင့်ရဲ့လိပ်စာကိုရှာဖွေခြင်းအားဖြင့်။
မဲရုံများကိုမနက် ၆ နာရီမှည ၇ နာရီအထိဖွင့်သည်။
အိမ်နီးချင်းဆန်းသစ်တီထွင်မှုစင်တာ, 3207 Meramec လမ်း
Grbic ပွဲခန်းမ, 4071 Keokuk လမ်း
Froebel မူလတန်းကျောင်း, 3709 Nebraska ရိပ်သာလမ်း
Meramec မူလတန်းကျောင်း၊ ၂၇၄၅ Meramec လမ်း
Gambrinus ခန်းမ, 3650 Wisconsin ပြည်နယ်ရိပ်သာလမ်း
သောမတ်စ် Dunn သင်ယူရေးစင်တာ, 3113 Gasconade လမ်း
Woodard မူလတန်းကျောင်း, 725 Bellerive Boulevard
Long ကအလယ်တန်းကျောင်း, 5028 မော်ဂန် Ford ကားလမ်း
၉၊ ၁၁ နှင့် ၁၃ ရပ်ကွက်များရှိသည် အပိုဆောင်းမဲရုံများ ယေဘူယျအားဖြင့် Dutchtown Greater ရပ်ကွက်၏အပြင်ဘက်ရှိဒေသများအတွက်ဖြစ်သည်။ တနည်းကား, သေချာအောင်လုပ်ပါ သင်၏မဲဆန္ဒနေရာကိုကြည့်ပါ သင်မှန်ကန်တဲ့နေရာကိုသွားမယ်ဆိုတာသေချာစေရန်။
ဓာတ်ပုံ ID မလိုအပ်ပါ။ မဲပေးလိပ်စာပါသောလခတစ်ခုသို့မဟုတ်လက်ရှိအသုံးအဆောင်ဥပဒေကြမ်းကိုလက်ခံနိုင်သည်။
သငျသညျကန့်သတ် mobility ရှိပါက သငျသညျ "ထိန်းချုပ်ခြင်း" သို့မဟုတ်မဲရုံနေရာအပြင်ဘက်မဲပေးနိုင်လိမ့်မည်။ သင်၏မဲရုံသို့သွားပြီးတစ်စုံတစ် ဦး အား ၀ င်ခွင့်တောင်းခံသင့်သည်။ မဲရုံ ၀ န်ထမ်းများသည်သင့်အားသင့်တော်သောအချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်းသင်ဆန္ဒမဲပေးသင့်သည်။
သငျသညျမဲဆန္ဒနယ်မှာလှည့်လျှင် မည်သည့်အကြောင်းပြချက်ကြောင့်မဆိုရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာတရားသူကြီးများသည်မြို့တော်ရွေးကောက်ပွဲဘုတ်အဖွဲ့ကိုခေါ်ဆိုရန်သေချာစေပါ။ သူတို့သည်သင်မဲပေးနိုင်သည်ကိုအတည်မပြုနိုင်သေးပါက၎င်းတို့အားသင့်အားယာယီမဲပေးရန်တရားဝင်တောင်းဆိုထားသည်။ ယာယီမဲကိုလက်ခံခြင်းမပြုမီ၊ ခေါ်ဆိုခ 1-866-ကျွန်ုပ်တို့၏-Vote (1-866-687-8683) ရွေးချယ်စရာများကိုဆွေးနွေးရန်။
အကယ်၍ သင်သည်အမှားတစ်ခုသို့မဟုတ်ကျူးလွန်သောပြစ်မှုများကိုကျူးလွန်ခြင်းခံရလျှင်သင်သည်သင်၏ဝါကျကို (အစမ်းခန့်သို့မဟုတ်လြှို့ဝှကျစကားအပါအ ၀ င်) ပြီးဆုံးသွားပြီ ဖြစ်၍ သင်မဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသော်လည်းပြန်လည်မှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ်သည်။ အကယ်၍ သင်သိသူတစ် ဦး ဦး သည်တရားခွင်မတိုင်မီချုပ်နှောင်ခြင်းကိုထောင်သွင်းအကျဉ်းချလျှင်၎င်းတို့သည်ဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
သင်သည်ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်မဲပေးရန်မှတ်ပုံတင်ခြင်းဖြစ်ပါကသင်၏မှတ်ပုံတင်ပုံစံအပြင်သင်မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြရန်လည်းလိုအပ်သည်။ လက်ခံနိုင်သော ID အမျိုးအစားများမှာ
လျှောက်လွှာ၏နံပါတ် (၃) တွင်၊ သင်သည်“ မှတ်ပုံတင်အသစ်” အကွက်ကိုစစ်ဆေးပါလိမ့်မည်။
သင်သည်သင်၏အမှန်တကယ်အိမ်လိပ်စာကိုအကွက် ၅ တွင်သေချာအောင်သေချာအောင်လုပ်ပါ။ သင်၏မေးလ်လိပ်စာနှင့်မတူပါကထိုအချက်အလက်ကိုအကွက် ၆ ထဲတွင်ဖြည့်နိုင်သည်။
သင်မဲပေးရန်မှတ်ပုံတင်ပြီးသည့်နောက်ဆုံး အချိန်မှစ၍ သင်ပြောင်းရွှေ့ပါကသင်၏မဲဆန္ဒရှင်စာရင်းကိုမွမ်းမံရန်လိုအပ်သည်။ စိန့်လူးဝစ္စစီးတီးကိုသင်ပြောင်းရွှေ့ခဲ့လျှင်၊ ကွက်လပ် ၃ တွင်“ လိပ်စာပြောင်းလဲမှု” အကွက်ကိုသင်စစ်ဆေးလိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင်သည်အခြားတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်မှပြောင်းရွှေ့လျှင် (ဥပမာ - စိန့်လူးဝစ္စတီကောင်တီမှစိန့်လူးဝစ္စစီးတီးသို့ပြောင်းရွှေ့သွားလျှင်) အကွက် ၃ ရှိ“ မှတ်ပုံတင်အသစ်” ကိုစစ်ဆေးသင့်သည်။ သင်မသေချာပါက“ မှတ်ပုံတင်အသစ်” ကိုစစ်ဆေးပါ။
သင်သည်သင်၏အမှန်တကယ်အိမ်လိပ်စာကိုအကွက် ၅ တွင်သေချာအောင်သေချာအောင်လုပ်ပါ။ သင်၏မေးလ်လိပ်စာနှင့်မတူပါကထိုအချက်အလက်ကိုအကွက် ၆ ထဲတွင်ဖြည့်စွက်နိုင်သည်။ အကွက် ၁၂ တွင်သင်မဲပေးရန်သင်ယခင်ကမှတ်ပုံတင်ထားသည့်လိပ်စာပေးရန်တောင်းလိမ့်မည်။
သင့်တွင်ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ရှိပါကသင်သည်သင်၏လိုင်စင်နံပါတ်ကိုအကွက် (၇) တွင်ထည့်သွင်းရန်လိုအပ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်လူမှုဖူလုံရေးနံပါတ်ရှိပါကသင်သည်သင်၏ SSN ၏နောက်ဆုံးဂဏန်းလေးလုံးကိုအကွက် ၈ တွင်ရေးထည့်ရန်လိုအပ်သည်။ သင်သည်သင်၏ရက်စွဲကိုထည့်သွင်းရန်လိုအပ်သည်။ box7မှာမွေးဖွား၏။
သင်၏မွေးသက္ကရာဇ်နှင့်ဖုန်းနံပါတ် (လေးထောင့်ကွက်နှင့် ၁၁) ကိုမလိုအပ်ပါ။
လေးထောင့်ကွက် (၁၃) တွင်သင်ဖြည့်စွက်ထားသောအချက်အလက်များသည်မှန်ကန်ကြောင်းအသိအမှတ်ပြုပြီး၊ သင်၏လျှောက်လွှာကိုလက်မှတ်ထိုးပါ။
သင်လုပ်နိုင်သည် သင့်ရဲ့မှတ်ပုံတင် status ကိုစစ်ဆေးပါ or မဲမှမှတ်ပုံတင်ရန် မစ်ဆူရီပြည်နယ်အတွင်းရေးမှူး၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်ပေါ်တွင်။
သင်တစ်ဦးရနိုင် PDF မဲဆန္ဒရှင်မှတ်ပုံတင်လျှောက်လွှာ စိန့်လူးဝစ္စမြို့တော်၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်မှထိုပုံစံကိုပုံနှိပ်ထုတ်ပါ။
မော်တော်ယာဉ်အခွန် ဦး စီးဌာန (လိုင်စင်ရုံးများ / DMVs)
သင်မှန်ကြောင်းအတည်ပြုချင်ပေမည် မဟုတ် ထိုအပေါ် မလှုပ်မရှားမဲဆန္ဒရှင်များစာရင်း။ အကယ်၍ ရွေးကောက်ပွဲဘုတ်အဖွဲ့သည်သင်၏လိပ်စာကိုအတည်မပြုနိုင်ပါကသင်စာရင်းထဲရောက်သွားနိုင်သည်။ သင်စာရင်းတွင်ရှိနေသလားစစ်ဆေးရန်၊ ရွေးကောက်ပွဲဘုတ်အဖွဲ့ ၀ ဘ်ဆိုဒ်ကိုကြည့်ပါ.
ရွေးကောက်ပွဲနေ့၌၎င်းတို့၏ပုံမှန်မဲရုံသို့သွားရောက်ရန်မမျှော်လင့်နိုင်သည့်မဲဆန္ဒရှင်များသည်ဆန္ဒမဲပေးရန်လျှောက်ထားနိုင်သည်။ မဲပေးရန်ပျက်ကွက်သူများအတွက်လက်ခံနိုင်သောအကြောင်းပြချက်များမှာ -
သင်လုပ်နိုင်သည် ပျက်ကွက်မဲပေးသည့်လျှောက်လွှာကို download လုပ်ပါ နှင့် အပိုဆောင်းညွှန်ကြားချက်ကိုရှာပါ စီးတီးရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်မှာ။
လျစ်လျူရှုထားသည့်ဆန္ဒမဲများကိုရွေးကောက်ပွဲဘုတ်အဖွဲ့သို့ကိုယ်တိုင်ပေးပို့နိုင်သည်သို့မဟုတ်စာဖြင့်ပေးပို့နိုင်သည်။ လာကြည့်ပါ ရွေးကောက်ပွဲဘုတ်အဖွဲ့ ၀ ဘ်ဆိုဒ် ပြီးပြည့်စုံသောအသေးစိတျအဘို့။
* ဤ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်ဖော်ပြထားသောအချက်အလက်များသည် DT2 မှကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၊ နိုင်ငံရေးပါတီများသို့မဟုတ်ဆန္ဒမဲပေးမှုအတွက်ထောက်ခံချက်သို့မဟုတ်ဆန့်ကျင်မှုကိုရောင်ပြန်ဟပ်ရန်ရည်ရွယ်ခြင်းမရှိပါ။ ဤအချက်အလက်သည်မဲဆန္ဒရှင်ပညာရေး၏ရည်ရွယ်ချက်အတွက်သာဖြစ်သည်။ နောက်ကျောထိပ်.
ထိပ်တန်းဓာတ်ပုံ ရှင်ပေါလု Sableman.
ဒီစာမျက်နှာကိုမျှဝေပါ Facebook က, တွစ်တာဒါမှမဟုတ် အီးမေးလ်လိပ်စာ။ ဤစာမျက်နှာကိုနောက်ဆုံးပေါ်မွမ်းမံခဲ့သည် ဧပြီလ 22nd, 2021 .
ဒိန်းမတ် Dutchtown ဆုံးဖြတ်: မဲ!
အဂၤလိပ္ (English) • စပိန် (Spanish) • TiếngViệt (Vietnamese) • አማርኛ (Amharic) • العربية (Arabic) • বাংলা (Bengali) • ဗမာစာ (Burmese) • Bosanski (Bosnian) • 简体中文 (Chinese) • français (French) • नेपाली (Nepali) • فارسی (Pashto) • پښتو (Persian) • Afsoomaali (Somali)